शुन्दर देखिन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस यस्तो उपाय ! | khaltinews.com
एजेन्सी । आफु शुन्दर देखिनको लागी महिलाहरुले धेरै उपायहरु अपनाई रहेका हुन्छन् । बिभिन्न किसिमका औषधिको प्रयोग देखि लिएर महङ्गा ब्रान्डका कस्मेटिकहरु प्रयोग गर्न पनि पछि पदैनन् । तर बिभिन्न औषधिहरुको प्रयोग भन्दा पनि घरेलु माध्यमबाटनै आफुलाई शुन्दर राख्न सकिन्छन् । तरिकाहरु निम्न छन् ।
सफा अनुहारका लागी हामीले आफ्नै बारीमा फल्ने पुदिन प्रयोग गर्न सक्छौ । पुदिनाको पात पिसेर अनुहारमा लगाएर सुकेपछि धुने गर्नाले अनुहार सफा हुने गर्दछ भन्ने बिभिन्न रिसर्चहरुले देखाएका छन् ।
२. अण्डा प्रयोग
अनुहारलाई चाउरीपनबाट बचाउनको लागी अण्डाको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अण्डाको सेतो भाग अनुहारमा लगाउनुस् अनि २० मिनेट पश्चात चिसो पानीले धुनुस् । अण्डामा हुने एस्ट्रिजेन्टले छाला कसिलो बनाउन मद्धत गर्छ । धेरैजसो इन्डियाका चर्चीत नायिकाहरुले पनि यो बिधि प्रयो गर्ने गरेको अन्र्तवार्तामा बताइरहेका हुन्छन्
अनुहारलाई शुन्दर राख्नको लागी हामीले मसाज गर्ने गर्नुपर्दछ । मसाजले रक्त सञ्चार बढ्छ र कोषहरुको ‘रिजेनेरेशन’ बढ्छ जसको कारण आँखा सुन्निएको जस्तो हुन कम हुनुको साथै अनुहारमा चाउरिपनको समस्या बिस्तारै हट्दै जान्छ ।
४. चौलानी पानीको प्रयोग
चामल भिजाएर पकाउनको लागी तयार पारिएको चौलानी पानी अनुहारको लागी एकदमै उपयुक्त हुने गर्दछ । जसलाई हामी चौलनी पानी पनि भन्ने गर्दछौ । सो चौलानी पानीलाई टोनरको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको लागि पालिस नगरिएको चामललाई एउटा भाँडोमा राखेर भिजाउँनुस । केही समयमा माथी सेतो तह देखिन्छ । त्यसपश्चात पानी मात्र छानेर त्यसलाई फ्रिजमा राख्नुस् । यो पानी तीनचार दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । कपासको मद्धतले यो अनुहारमा लगाउनुस् । तीनचार दिन पश्चात फेरि यसरी नै नयाँ पानी बनाएर फ्रिजमा राख्नुस् । यसले अनुहारमा भएका मरेका शेलहरु बिस्तारै निकदै जान्छ ।
ग्रिन–टीले हाम्रो मोटोपन घटाउनुका साथै यसले हाम्रो अनुहार चम्किलो पार्न पनि मद्धत गर्दछ । हरेक दिन बिहान कप ग्रिन टि पिउँनाले पेट स्वस्थ्य हुनुको साथै नियमित प्रयोगले जवान देखिन मद्दत गर्छ । यसको प्रयोगले रक्तसंचारमा भएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न मद्धत गर्दछ ।